Ụbọchị My Pet » 3 Atụmatụ Iji dịwara N'oge udomo oro Oge
emelitere ikpeazụ: Jan. 26 2021 | 2 min agụ
Ọ bụ na oge nke afọ ọzọ. Udomo oro oge ka snuck elu gị na esesịn na-akpa ógbè gị adị. Ọtụtụ ihe niile na-nighters, ụbọchị nke nchekasị na awa cramming bụ ihe ndụ gị dị ka a na-amụrụ mejupụtara. M ugbua ije gburugburu campus na adị m ka m bụ na a zombie apocalypse- nke ahụ bụ ihe a enweghị ụra na nnyefere kọfị na swiiti eme ka nkezi na-amụrụ.
Ọzọ pụta udomo oro oge bụ na anyị nile na-mesiri ụfọdụ ebe ma na-ya na ndị ezigbo anyị. Nke a abụghị ozi ọma n'ihi na gị mkpakọrịta nwoke na nwaanyị ndụ. Eleghị anya ị na-eche dị ka gị enweghị na-elekọta mmadụ ná ndụ nakwa na gị egwuregwu a na-aga-ala n'iyi. Ọ bụrụ na ị ghọtara na ọ ma, na ị banyere.
Dabara nke ọma, ị na-adịghị mkpa fret. Ndị a 3 Atụmatụ pụrụ inyere gị aka Ace gị ule ma na-a elu akara ke gị mkpakọrịta nwoke na nwaanyị ndụ.
Tụlee-ala azụ gị amara.
Udomo oro oge bụ ihe dị mkpa oge gị na akwụkwọ ọrụ, ya mere, ọ pụrụ ịbụ na a smart echiche na-ajụkwa ya na ụbọchị. Ebe ọ bụ na ị chọrọ ime nke ọma na gị ule, ị na-achọghị ka n'ihe ize ndụ ya site efunahụ bara uru ọmụmụ oge ruru ka a di na nwunye nke ụbọchị. Mgbe ị na-amụta na-omimi na nkà mmụta sayensị formulas na azụmahịa ndapụta, amụta otú e si nwa oge gbatuo gị amara ga-a uru maka na gị na onye òtù ọlụlụ.
Balance bụ dị nnọọ ka mkpa dị ka caffeine.
Red ehi, ihe nracha, ibe na kọfị iyi ịzụlite a elu larịị nke pụtara n'oge udomo oro oge. Otú ọ dị, ha agaghị na-egosi na-enye aka mgbe ọ na-abịa mkpakọrịta nwoke na nwaanyị, otú itule bụ ọhụrụ gị enyi kasị mma. Ọ ga-eme gị ọma ọ bụla ma ọ bụrụ na ị na-amụ ụbọchị nile, abalị niile, mgbe ahụ ìhè anyanwụ na-adịghị ihe ọ bụla oge izu. Ịnọgide na-enwe nguzozi n'agbata ịmụ na izu dị mkpa na e nwapụtaworo aka gị na-amụ nkà na udomo oro arụmọrụ.
Kwesịrị ekwesị ka oge na tụsaratụ, nchegbu, na bask na ụfọdụ ìhè anyanwụ bụ isi. Ndị a na-amụ oge izu ghọọ ezigbo ohere na-eji oge ndị ị hụrụ n'anya. Tụlee nwere a nkiri n'abalị ọ bụla mere mgbe ma ọ bụ na-ekiri TV a show ọnụ.
Alternatively, Ịpụ n'èzí na ịbụ-arụsi ọrụ ike bụ ezigbo bonding ọrụ, nakwa dị ka a uru gị n'ozuzu ike- ịhụ ka ihe oriri gị mejupụtara sugar na caffeine. Gaa maka obere n'ọnọdụ dị iche iche n'etiti cramming sessions na rant banyere nchegbu nke elu-akụziri ndụ. Ikuku ga na-ụbụrụ gị ọhụrụ.
Ma obere ndụ Chats n'elu Skype, akparị ụka na ekwentị nnọọ ịnụ olu ha, abalị cuddle sessions ma ọ bụ na-ehi ụra-overs, jide n'aka na ị nọgide na-enwe nguzozi n'agbata arụ ọrụ na egwuregwu.
Nke a onye mara mma onwe-nkọwa. Echefula usọrọ ozugbo gị ule na-meriri! Kwadebe ihe fun na ma nke i nwere ike ime usọrọ mmeri nke nile mee mkpatụ gị ule na nweghachi njikọ gị. Ọ bụrụ na ị na-anụ ọkụ n'obi biva na Akpara ihe tupu mgbe ahụ, ọ ga-enye gị ihe na-atụ anya.
Ndị a 3 Atụmatụ ga-enyere gị na-ahụ ọkụ na ịhụnanya gị ndụ n'oge gbalụ gbalụ udomo oro oge. Site n'ịmụ ndị a tidbits nke ihe ọmụma na gị ọtụtụ ọmụmụ, ị ga-enwe ike imeri gị ule nakwa dị ka gị mkpakọrịta nwoke na nwaanyị ndụ.